ဖေဖေ့ပေးစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Relationships & Family » ဖေဖေ့ပေးစာ
Posted by ဖီးကျူ on Sep 17, 2010 in Relationships & Family |2comments
2010 latter ပညာပေး
ပြင်သစ်စာရေးဆရာကြီးတယောက် ငယ်ရွယ်စဉ် တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့ချိန်မှာ ဖခင်ဖြစ်သူက သွန်သင်ဆုံးမစာတွေကို ရေးသားပေးပို့ ခဲ့ပါတယ် ။ သူ့ ဖခင် ပေးပို့ တဲ့ စာတွေကို စုဆောင်းသိမ်း ဆည်းထားခဲ့ပြီးနောက် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမှာ စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေ ဖြန့် ချီခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ စာအုပ်ဟာ အလွန်နာမည်ကြီးပြီး နိုင်ငံတကာမှာ ဘာသာပြန်ထုတ်ဝေ ရေးသား ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကို စာရေးဆရာကြီး မြသန်းတင့်က ဘာသာပြန်အဖြစ်ရေးသားခဲ့ဘူးပါတယ် ။ ပေးစာများ ကို စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းကြောင့် စာရေးဆရာများလောကမှာ ရေးနည်းရေးဟန် တမျိုးအဖြစ် ခေတ်စားလာခဲ့ပါတယ်။ စာရေးဆရာ အာဘော်ကိုသုံးပြီး ပေးစာရေးနည်းနဲ့ရေးသားလာခဲ့ကြတာ … သားသားလေးဖတ်ဖို့၊သမီးလေးဖတ်ဖို့၊တူမောင် ဖတ်ဖို့…စသဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ]
ယခု ဖေဖေ့ပေးစာတစ်စောင်ကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အာဘော်ကိုသုံးပြီး ပေးစာအဖြစ်ဖန်တီးရေးသားထားခြင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ဖေဖေထံမှ ရေးသားပေးပို့ လိုက်တဲ့ စာတစောင်ကို လက်ခံရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စာထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ ကျွန်တော်အပေါ်မှာထားရှိတဲ့ ဖေဖေရဲ့သဘောထားနဲ့ဖခင်တယောက်ရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာကို ဖတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲအတွက်သာမက ဖီးကျူရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက်ပါ အကျိးကျေးဇူး တစုံတရာ ရစိမ့်သောငှာ မူရင်းအတိုင်း မျှဝေဖေါ်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ .
သားရေ .. ဖေဖေ စာရေးလိုက်တယ် ။ ဖေဖေ ၊မေမေတို့တအိမ်သားလုံး စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာချမ်းသာလျက် ရှိကြပါတယ် ။ ဖေဖေတို့ အတွက် ပူုပင်ကြောင့်ကြစရာမလိုပါ ။ သားအနေနဲ့စိတ်ချလက်ချ စာကြိုးစားပါလို့ ပြောချင်ပါတယ် ။ကျန်းမာချမ်းသာစွာ ပညာရှာမှီးနေတယ်ဆိုတာကို သိရလို့ဖေဖေတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရပါတယ်။စားသတိ ၊သွားသတိ ၊အိပ်သတိ၊ နေရာတိုင်း မှာ “သတိ” ရှိရှိနေထိုင်ပါ …သားရေ ..။အစားမတော် တလုပ် ၊ အသွားမတော် တလှမ်းဆိုတဲ့ စကားပုံ ကို သားလည်း ကြားဘူးပြီးသား ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပြီးတော့ သားရဲ့ ဆရာ … (နိုင်ငံကျော်လက်ဝှေ့ချံပီယံ ၊အမျိုးသားစာပေဆု(၃)ထပ်ကွမ်းရ စာရေးဆရာ ) ဘာမအထီခင်အောင်(ရွေဘို)ကပြောတယ် ။ မြန်မာလူမျိုးအားလုံးအတွက် အကျိုးရှိမည့် ဝထ္ထု ၊ဆောင်းပါးများကို အချိန်ရရင် ရေးသားစေချင်တယ် လို့ပြောပါတယ်။
နောက်တခု ပြောချင်တာကတော့ … ဘာသာ ၊သာသနာအတွက် ဒါနပါရမီမြောက်အောင် လှူဒါန်းပေးပါလို့ ပြောခဲ့တယ်မလား ..။ အဲတာကြောင့် ဖေဖေတို့ လဲ (ကာလဒါန) အဖြစ် လှူဒါန်းမှုတွေလုပ်နေပါတယ်။ ကာလဒါနဆိုတာက တော့ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်မှာ အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတာကို လှူဒါန်းလိုက်ခြင်းပါပဲ ။ဒါကြောင့် ဘယ်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို လှူသင့်တယ်ဆိုတာ ဖေဖေ ၊မေမေတို့ အမြဲတမ်း ရွေးချယ်နေကြတယ်။ အဲဒီ ကာလဒါန ဆိုတဲ့ လှူဒါန်းမှုကို ပြုလိုက်ရတဲ့ အကျိုးကြောင့် သားရော ၊ ဖေဖေ မေမေ ၊ မမ ၊ဘဒွေးလေးတို့အားလုံး ဆုတောင်းစရာမလိုပဲ နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့ ဥာဏ်ပညာပါရမီတွေ ရကြပါလိမ့်မယ်။အဓိကပြော ရရင် စေတနာပေါ့..သားရေ ။ အခုချိန်မှာတောင် အရင်ဘဝက စေတနာစစ်စစ်နဲ့ပညာရေးပါရမီ တွေ လုပ်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာ ပညာရှာမှီးနိုင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ ။သားရဲ့ကြိုးစား အားထုတ်မှုတွေကို လည်း ဖေဖေတို့ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ် ။ရွေဘိုဒီဂရီင်္ကောလိပ်မှာ ကတည်းက မအိပ်မနေ ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာ …ဖေဖေတို့အသိဆုံးပေါ့ ။နောက်တခု ဒါနအလှူအတွက် ကုသိုလ်ပွါးဖို့ပြော ပြအုံးမယ် ။ပြီ့း ခဲ့တဲ့ တရက်က ရွေဘိုမြို့ ရဲ့အနောက်ဘက် (သပြေသာရွာ)အောင်ဆုပန် ကျောင်း တိုက်ဆိုတာ သိတယ်မလား။ အဲဒီကျောင်းတိုက်မှာ ဆရာတော် သံဃာတော်တွေ တရားထိုင် ၊စာအံ တာတွေ စသဖြင့် သာသနာဝန်ဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် အလှူဝထ္ထုငွေ လှူဒါန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ။ သားအနေနဲ့ကုသိုလ်ပွါးနိုင်အောင်ပြောပြပေးတာပါ ။အလှူဒါန တခုခုကို ပြုလုပ်တိုင်း မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်ဖြစ် သန့် သန့် ရှင်းရှင်း၊ ရိုရိုသေသေ ။လေးလေးစားစား ၊ယဉ်ကျေးစွာ လှူဒါန်း ပါလို့ပြောချင်ပါတယ် ။
မိမိနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံသူ အားလုံးကို စိတ်ချမ်းသာပါစေ ၊ မိမိကြောင့် သူတပါး စိတ်မချမ်းမသာ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ၊ ဘဝရပ်တည်မှုအတွက် ပိုက်ဆံရှာတဲ့အခါမှာလည်း သမာအာဇီဝနဲ့ဖြူစင်သန့် ရှင်းစွာ ရှာဖွေစုဆောင်းဖို့ ပါပဲ ။ မိမိ အသက်ရှင်သန်ဖို့ အတွက် သူတပါး အသက်ကို စတေးပြီး သတ်ဖြတ်ခြင်း၊မွေးမြူခြင်းကို ဘယ်တော့မှ မလုပ်ပါနဲ့ လို့ ဖေဖေ…ခဏခဏပြောဘူးပါတယ် ။နောက် ပြီးတော့ လိမ်လည်လှည့်ဖျားပြီးတော့ ငွေရှာတာတွေ၊သူတပါး မျက်ရည်ထွက်မှ မိမိဘဝ စိုပြည်အောင် ဝင်ငွေရှာတာတွေက မသန့် ရှင်းတဲ့ ငွေတွေလို့ ပြောရမှာပါ။ မိမိရှာထားတဲ့ ငွေက မသန့် ရှင်းရင် ရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့သေချာပေါက်ရင်ဆိုင်ရမှာပဲလေ ။ ရန်သူမျိုး ငါးပါးဆိုတာ (၁) ရေ (၂) မီး (၃)မင်း (၄)သူခိုး (၅)မချစ်မနှစ်သက်သောသူ (သား၊ သမီးဆိုး ) တွေပါပဲ ။အခုလိုပြောပြရတာကတော့ သားက မစင်ကြယ်တဲ့ငွေတွေ ရှာနေလို့ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိ ကိုယ်ကျင့်တရား အမြဲတမ်း ဖြောင့်မတ်နေဖို့ပြောပြတာပါ။ စိတ်နေမပြောင်း ၊စိတ်ကောင်းမပျက်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဖြောင့်မတ်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့သတိပေးတာပါ။ သားရဲ့ ဘဝမှာ ဖြူစင်သန့် ရှင်းစွာ အသက်မွေးစေချင်လို့ ပဲ … တခြားဝန်ထမ်းအလုပ်တွေကို ခွင့်မပြုခဲ့တာပါ။ ရာထူးကြီးကြီတွေရပြီး ၊ဝိသမလောဘနဲ့စီးပွါးရှာ ကြီးပွါးချမ်းသာတာမျိုးကို အားပေးအားမြှောက်လုပ်မည့် မိဘထဲမှာတော့ ဖေဖေ မပါပါဘူး သားရေ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူဖြစ်ရတဲ့ ခဏတာ ဘဝလေးမှာ အကုသိုလ်အလုပ်တွေနဲ့သံသရာမှာ ပါမသွားစေချင်လို့ ပါပဲ။ သားရဲ့ပညာဒါနပါရမီလုပ်ခဲ့တာတွေကို ဖေဖေတို့ က အမြဲတမ်း ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်လျက်ရှိနေကြတာပါ ။
ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ပြောရအုံးမယ် ။ဖေဖေ ပေးချင်တဲ့ဆေးတခွက်ကတော့ ရေသောက်ဖို့ ပါပဲ ။ ရေကို တရက်မှာ ဖန်ခွက်ကြီးနဲ့(၇) ခွက်လောက် သောက်ပေးပါ။ ဘာကြောင့် လည်းဆိုတော့ ဆီးနဲ့ ဝမ်းကို မှန်အောင်လို့ ပါပဲ ။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အညစ်အကြေးတွေကို ရေးများများ သောက်ပြီးတော့ ဆေးကြောခြင်းပါပဲ ။ဆီးဝမ်းစွန့် ထုတ်တာတွေ မမှန်ဘဲ ချုပ်နေရင် အတွင်းထဲက နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကန်ထွက်လာတတ်တယ် ။အာခံတွင်းနဲ့နံတာတွေ ၊ခေါင်းမူး ၊ခေါင်းကိုက်၊ ခေါင်းအုံ ၊ မျက်စိမှုန်တာတွေက ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ကန်ထွက်လာတာတွေပဲပေါ့ ။ ဝမ်းတလုံးကောင်းရင် ခေါင်းမခဲ ဘူးဆိုတဲ့ စကားပုံကိုလည်း ကြားဘူးပြီးသာဖြစ်မှာပါ ။ဖေဖေတော့ စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးတယ် ။စာရေး ဆရာကြီးတယောက်က ဒီလို ရေးဘူးတယ်လေ။ မျိုသမျှ ယိုရမယ် ၊ သောက်သမျှပေါက်ရမယ်တဲ့ ။အဲ တာကြောင့်လည်း ရေများများသောက်ဖို့ပြောပြနေတာပါ ။ရေများများသောက်တော့ ဝမ်းကို ပျော့စေ တယ် စွန့် ပစ်အရည်အဖြစ် ဆီးကို ရွင်စေတယ် ။ပြီးတော့ ချွေးအဖြစ်လဲ စွန့် ထုတ်နိုင်တယ်။သွေးအား ကိုလည်း တိုးစေတယ်။ ချွေးထွက်များဖို့ အတွက်လည်း ကျန်းမာရေးလေ့ကျင်းခန်းကိုလည်း ပုံမှန်လှုပ် ရှားပေးပါ ။
နောက်ပြီးတော့ လည်ပင်းဇက်တိုင်ကိုလည်း ခဏခဏ ချိုးလိမ်တာတွေ မလုပ်ပါနဲ့။အဲဒီအကျင့် ကို တတ်နိုင်သလောက် ဖျောက်ပါ ။ဇက်တိုင် အနေခက်လာရင် လက်ညိုးလက်မနဲ့ညင်သာစွာလေး နှိပ်နယ်လိုက်ပါ။သက်သာပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ် ။ပြီးတော့ ရင်ဘတ်နဲ့ဦးခေါင်းပိုင်းကို အအေး မိ မခံပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဓိက အင်ဂျင်အစိတ်ပိုင်းတွေကို အထူးသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ် ။အစား အသောက်ကိုလည်း အလွန်အကျွံမစားပါနဲ့ ၊ အစာမစားဘဲလည်း မနေပါနဲ့။ပုံမှန်လေး နေထိုင်စား သောက်ပါ ။အပြင်ထွက်လည်တာတွေ ၊ ညမအိပ်ပဲ နေတာတွေကို အထူးသတိထားပြီး ရှောင်ကြဉ်ပါ။ သားတို့ ဆီမှာ အင်တာနက်ကို အချိန်ပြည့်သုံးနိုင်တယ်ဆိုတာ သိရတယ် ။ အင်တာနက်မှာ ဗဟုသုတ ၊ပညာရှာမှီးရာမှာ လွယ်ကူတယ်ဆိုတာ ဖေဖေ သိပါတယ် ။ဖေဖေ ကြားဘူးထားတာတွေ နဲ့သားကို ပြောချင်တာကတော့ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုပြီး ကြည့်တဲ့ အခါ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နဲ့ဆန့် ကျင်တဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို လုံးဝမကြည့်ပါနဲ့ ။ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ယဉ်ကျေးမှု လူနေမှု စရိုက် တွေက ဖေဖေတို့မြန်မာတွေရဲ့ဘာသာ ၊ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့် ကျင်ဘက်တွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သားလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ ။မိမိအတွက် အကျိုးရှိနိုင်တာတွေကိုပဲ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုပါ လို့ပြောချင်တာပါ။ အဲဒါမှလည်း တန်းဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို ဖြုန်းမပစ်ပဲ အသုံးချရာရောက်မှာပါ ။
အချိန်တွေဘယ်လောက်ပဲကုန်ကုန် ဘာပဲလုပ်လုပ် ဘာသာတရားကိုတော့သီးသန့် အချိန်ပေးပြီး အဓိဌာန်နဲ့ လုပ်ပါ ။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်ပြီး ရှိခိုးဦးချပါ ။ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူထားခဲ့တဲ့ တရားတော်များ ၊ဗုဒ္ဓကျမ်းစာပေများကို ရှိခိုးဦးချပါ။မြတ်စွာ ဘုရားရှင်၏ တရားတော်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေကြသော သံဃာတော်များကို ရှိခိုးဦးချပါ။ ဖေဖေတို့ မိသားစုအားလုံး ဗုဒ္ဓတရားကျင့်စဉ်များကို နည်းမှန်လမ်းမှန်ရောက်အောင် ပြုပြင်ဆုံးမပေး သော ဆရာတော်ဘုရာကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုလည်း ရှိခိုးဦးချပါ။ ကိုးလလွယ်၊ ဆယ်လမွေး၊ဖဝါး လက်နှစ်လုံး ၊ပုခုံးလက်နှစ်သစ်ကတည်းက သားရဲ့ ကျန်းမာရေး ၊ ဘာသာရေး ၊ကိုယ်ကျင့်တရား၊ပညာ ရေး စတာတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဖေဖေ မေမေတို့ ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ ကို ရှိခိုးဦးချပါ ။
အထက်ပါအတိုင်း ရှိခိုးဦးချပြီးမှ ငါးပါးသီလခံယူဆောက်တည်ပါ။ ကောင်းမှုတခု နေ့ စဉ်ပြုဆိုတဲ့ အတိုင်း မပျက်မကွက်ဆောင်ရွက်ပါ။ ငါးပါးသီလခံယူဆောက်တည်ပြီးရင် တရားတထိုင်ခန့် ကို ရှုမှတ် ပါ။ တရားထိုင်ရာတွင် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ဘယ်နေရာက ယားယံခြင်း ဖြစ်ဖြစ် မလှုပ်ရှားပါနဲ့ ။တည်ကြည် ဖြောင့်မတ်စွာ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ထိုင်ပါ။ တရားမထိုင်မှီ ဘယ်လိုရွတ်ဆိုရမည်ဆိုတာကိုလည်း ပြောပြ အုံးမယ်။
…………………… ဘုရားတပည့်တော်သည် ဘုရား၊ တရား ၊သံဃာ၊ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၊အမိ ၊အဖ ၊ဆရာသမားများ အပေါ်၌ ဓမ္မအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သော ကာယကံမှု ၊ဝစီကံမှု၊မနောကံမှု ၊တခုခုတို့ ဖြင့်ပြစ်မှား ကျူုးလွန်မိခဲ့သည်ရှိသော် အပြစ်မှခွင်လွတ်တော်မူပါ အရှင်ဘုရား ….။ ကျွန်ုပ်ထက်ကြီးမြတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အပေါ်၌ ဓမ္မအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သော ကာယကံမှု ၊ ဝစီကံမှု၊ မနောကံမှု တခုခုတို့ ဖြင့်ပြစ်မှားကျူုးလွန်မိခဲ့သည်ရှိသော် အပြစ်မှခွင့်လွတ်ပေးကြကုန်လော့။ ကျွန်ုပ်အောက်ငယ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ သည် ကျွန်ုပ်အပေါ်၌ ဓမ္မအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သော ကာယကံမှု ၊ဝစီကံမှု၊ မနောကံမှု ၊ တခုခုတို့ ဖြင့်ပြစ်မှား ကျူုးလွန်မိခဲ့သည်ရှိသော် အပြစ်မှခွင့်လွတ်ပါ၏။ ဘုရားတပည့်တော်၏ ရုပ်နာမ်နှစ်ပါး ခန္ဓာငါးပါးကို-
(၁) မြတ်စွာဘုရားအား လှူဒါန်းပါ၏
(၃) သံဃာတော်မြတ် ၊ ဆရာတော်ဘုရားကြီးများအား လှူဒါန်းပါ၏
(၄) မိဘ ၊ဆရာသမားများအား လှူဒါန်းပါ၏
(၅) ဘုရားတပည့်တော်အား သတိပဌာန်ကမ္မဌာန်းကို တထိုင်ခန့် မျှ ပေးသနားတော်မူပါ အရှင်ဘုရား
ဤတထိုင်ခန့် မျှ အဓိဌာန်မြောက်ခဲ့သည်ရှိသော်…(လိုရာဆုကို ..စိတ်ထဲမှ တောင်းပါ )ဥပမာ- နိဗ္ဗာန်သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်သော ဥာဏ်ပညာပါရမီများ ရရပါလို၏ဘုရား…စသဖြင့် ဆုတောင်းပါ ။ ထို့ နောက် မိမိလုပ်နိုင်သလောက် အချိန်အတိုင်းတာထိ တရားထိုင်ပါ ။တရားထိုင်တဲ့အခါ နည်းလမ်း အမျိုးမျိူးရှိကြပေမဲ့ ဖေဖေကတော့ ဝိပသနာ ကမ္မဌာန်းကို အမြဲရှုမှတ်ပါတယ် ။ ဝိ = အထူး ၊ ပသနာ= ရှုမှတ်ခြင်းနည်းလမ်း လို့အဓိပ္ပါယ်ရတာကြောင့် ရုပ်နာမ်နှစ်ခု့ ဖြစ်ပျက်မှုကို ရှုမှတ်ခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်။
တရားထိုင်ပြီးတဲ့အခါ ရဟန်းရှင်လူ ၊သံဃာတော်၊ ဆရာတော်ဘုရားကြီးများ ။သူတော်စင်အပေါင်း တို့ ကို တပည့်တော်၏ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို ထပ်တူထပ်မျှရစေကြောင်း မေတ္တာပို့ ပေးပါ။နောက်ပြီး အန္တစကြာဝဠာအတွင်းရှိ ထွက်သက်ဝင်သက်ရှိသော သတ္တဝါအပေါင်းတို့ အား ကျွန်ုပ်၏ကုသိုလ် ကောင်းမှုကို ထပ်တူထပ်မျှရပါစေကြောင်း မေတ္တာပို့ ပါ။တရားထိုင်လို့ ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို မေတ္တာပို့ သခြင်းဖြစ်တယ် ။
အထက်ပါအတိုင်း ဖေဖေပြောပြတာတွေက စနစ်တကျ တရားထိုင်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့် သေချာစွာ မှတ်သားပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ ။အထက်ပါနည်းအတိုင်း နေ့ စဉ် လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် ကုသိုလ်ထူးတွေ နေ့ တိုင်းရရှိမှာပါ ။ပန်းဝတ်ရည်မှုန်လေးတွေကို စုဆောင်းတဲ့ ပျားကောင်လေးတွေ လိုပဲ နေ့ စဉ်နဲ့ အမျှ စုဆောင်းသွားရင် နောင်တချိန်မှာ ပျားလဘို့ ကြီးလို များပြားတဲ့ကုသိုလ်ထူး တွေ စုဆောင်းမိမှာ သေချာပါတယ်။
ပထမအရွယ်မှာ ပညာရှာ ၊ ဒုတိယအရွယ်မှာ ဥစ္စာရှာ ၊ တတိယအရွယ်မှာ တရားရှာ ….လို့တချို့ တွေ ပြောကြပေမဲ့ တရားကိုတော့ ဘယ်အရွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ရှာရမှာပါ ။တတိယအရွယ်မှ ..တရားရှာမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့လူတယောက်ဟာ တတိယအရွယ် မရောက်ခင် သေသွားခဲ့ရင် ဘယ်မှာ တရားရှာနိုင်တော့မလဲ ။အဲဒီတော့ ဘယ်မှာ လူဖြစ်ကျိုးနပ်နိုင်ပါ့မလဲ ။တတိယအရွယ်မှာ…. ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကလည်း ချွတ်ယွင်းတတ်တာဆိုတော့ တရားကို ဖြောင့်ဖြောင့် ရှာဖို့ လဲခက်ခဲ နိုင်တယ် …သားရေ..။အဲတာကြောင့် ကျန်းမာရေးကောင်းတုံး ငယ်ရွယ်တုံးမှာ တရားကိုတော့ ရှာရလိမ့်မယ် ။ အများကြီး မလုပ်နိုင်တောင်မှ တရက် ၂၄ နာရီမှာ ၁ နာရီလောက်တော့ တရား ကျင့်ကြံနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ ။
လူတချို့ တွေ ရဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝကိုလည်း ပြောပြပါအုံးမယ်။ အချို့ တွေက ရာထူး ၊အလုပ် အကိုင် ၊စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့ နေကြပီဆိုရင် ..လူတကာရဲ့ အပေါ်မှာ အသာ စီးရနေပြီးဆိုရင် မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံး သူ့ လုပ်စာစားနေကြသလို မာန်တက်ကြ တတ်တာကို တွေ့ ကြုံဘူးပါလိမ့်မယ် ။သူတို့ တွေဟာ အိုခြင်းဆင်းရဲ ၊နာခြင်းဆင်းရဲ၊ သေခြင်းဆင်းရဲ ၊ ဆိုတာတွေကို မသိကြတဲ့သူတွေပါပဲ ။ဒါပေမဲ့ သတ္တဝါ ၊ လူမှန်သမျှ အို ၊နာ၊ သေဆိုတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခ တွေကို မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် ။အဲဒီ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ပြင်ဆင် ထားဖို့ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကို ကျင့်ကြံ့ကရမယ်။
ဖေဖေ အတွေ့ အကြုံအရ ပြောရမယ်ဆိုရင် တရားထိုင်ရခြင်းအကျိုးကြောင့် စိတ်လက်ပေါ့ပါး တယ် ။ဖေဖေဟာ ၁၆နှစ်သားကတဲက တရားအလုပ်ကို လိုက်စားခဲ့တာမို့အခုချိန် ၅၆နှစ်ရောက်နေ တာတောင် လူငယ်လူရွယ်တယောက်လို စိတ်လက်ပျော်ရွင် လန်းဆန်းနေတုံးပါပဲ ။ကျန်းမာရေးအထူး ကောင်းမွန်လာတယ် ။ထိုးထွင်းဥဏ် ၊မှတ်ဥာဏ်တွေလည်း ပိုကောင်းလာတယ် ။ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ် ဖြစ် သာမာန်လူတွေလို ခပ်ပေါ့ပေါ့နေရင်တော့ သာမာန်အဆင့်လောက်ပဲ ဖြစ်မှာပါ ။လူတကာထက် သာချင်တယ်ဆိုရင် သူများထက်ပိုပြီး ကြိုးစားရမယ်။ ပိုပြီး ပင်ပန်းမယ် ။ဘာသာရေး ၊ပညာရေး၊လူမှု စီးပွါးရေးနယ်ပယ်တွေမှာလည်း လုတကာထက် တော်ချင်ရင် လူတကာထက်တော့ ပိုပြီးကြိုးစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ် ….သားရေ ။လောကမှာ အသိပညာ အတတ်ပညာတွေက ရှာဖွေကြိုးစားလေ အကျိုးရှိ လေဖြစ်တယ် ။
သားအတွက် စာအရှည်ကြီးကိုတော့ ရေးပြီးပါဘီ။ ဒီစာထဲမှာ ဖေဖေ ပြောခဲ့တာတွေက သား မသိသေးတာလဲ ပါနိုင်တယ် ။သိပြီးသားကို ပြန်လည်သတိဝင်ပြီး ပိုမို သိစေချင်တာလည်းပါတယ် ။သိပြီးသားတွေကို လက်တွေ့ လုပ်နိုင်အောင် နိုးဆော်ပေးချင်တာလဲပါ တယ် ။ ဖေဖေ့သားလေး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာပြီး လိုအင်ဆန္ဒများ ပြည့်စုံလို့နိဗ္ဗာန်မဂ္ဂ်ဖိုလ်သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်……………သားရဲ့ ဖေဖေ ……… ။
စာကြွင်း။ ။ယခုတင်ပြသော ဖေဖေ့ပေးစာသည် ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့တခုဖြစ်သော http://myanmarphysicist.blogspot.com တွင်တင်ပြခဲ့ဘူးပါသည်။ကျွန်ုပ်သည်
ဤမန္တလေးဂေဇက် ဝက်ဆိုက်တွင် စတင်ဖတ်မိရာမှ ( 17.9.2010) နေ့ တွင် မန်ဘာအဖြစ်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်၏ ။
တခြားဖိုရမ် ၊ ဝက်ဆိုက်များတွင် ရေးသားခဲ့ခြင်းမ၇ှိခဲ့ ။ကျွန်ုပ်၏ဘလော့တွင် ရှုပဗေဒနှင့်သက်ဆိုင်သော စာများကို ရေးသားလျက်ရှိရာ … နောင်လာလတ္တံ့ ရေးသားမည့်စာများကို ဤနေရာတွင် ဦးဦးဖျားဖျားတင်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်သည် ။
ယခင်ရေးသားခဲ့ပြီးသော စာများကို ဖတ်ရှုလိုပါက ကျွန်ုပ်ထံတွင် လာရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း…..
ဖီးကျူ ( ရွှေဘို)
ကိုဇေ has written 1 post in this Website..
View all posts by ဖီးကျူ →
ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ …. ကိုဖီးကျူရဲ့ ဖခင်ကြီး ရေးထားတဲ့စာက တကယ့်ကို အမြော်အမြင်ရှိတဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဆုံးမ စကားတွေပါ။ ကိုဖီးကျူရဲ့ ဖခင်ကြီးကိုလည်း လေးစားမိပါတယ်။ မြန်မာ မိသားစုတိုင်းမှာ အဲလို လေးစားလောက်တဲ့ ဖခင်မျိုးတွေ ရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ ယူဆမိပါတယ်။